Ciidamada Puntland oo toogasho ku dilay laba nin oo Daacish ahaa | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ciidamada Puntland oo toogasho ku dilay laba nin oo Daacish ahaa
Ciidamada Puntland oo toogasho ku dilay laba nin oo Daacish ahaa
Saraakiisha Ciidamada Puntland ayaa soo bandhigay meydadka laba ka mida dagaal-yahanada Ururka Daacish oo maanta lagu dilay Gobolka Bari.
Hawlgalka lagu dilay labadan nin ayaa ka dambeeyay, markii laba qarax oo is xigxigay gaadiid ay wateen Ciidamada Puntland lagula eegtay wadada isku xirto Xamure iyo Balidhidin ee Gobolka Bari, isla-markaana uu ku dhaawacmay nin askari ah.
War ka soo baxay Taliska Ciidamada PSF-ta Puntland ayaa lagu sheegay in mid ka mida raggaasi uu watay kaamiro, isla-markaana uu doonayay inuu duubo gaadiidkii ciidamadu la socdeen ee qaraxyada lala beegsaday.
“Ciidamada PSF oo garabsanaya ciidamada kale ee Puntland ayaa ku guuleystay in ay soo afjaraan xubno ka tirsan Daacish oo qaraxyo iyo miinooyin dhigayay wadada isku xirta Xamure iyo Balidhidin ee Gobolka Bari. Xubnahan ay ciidamada PSF dileen waxaa ka mid ahaa nin kaamiro watay oo horey u duubay kolonyo ka tirsanaa ciidamada amniga oo lala beegsaday qarax, dhowr maalmood ka hor, haddana laguna baahiyay barta Internet-ka. Maantay Wuxuu doonayay sidaas si la mid ah inuu duubo qaraxyada lala beegsanayo Ciidamada Difaaca Puntland.” Ayaa lagu sheegay warka.
Taliska PSF ayaa sidoo kale barraha bulshada ku soo bandhigay kaamiradii uu watay ninkaasi.
Daacishta Somaliya oo ah garab ka jabay Ururka Al Shabaab ayaa daba-yaaqadii bishii October ee sanadkii 2015 looga dhawaaqay Gobolka Bari, waxaana hoggaamiyahooda lagu magacaabaa Cabdiqaadir Muumin Cali.
Previous articleQoorqoor oo kulmiyay Golaha Wadatashiga & M/musharaxiinta (SAWIRRO)
Next articleC/qaadir Siidii oo Helicopter ku tagay Magaalada Marka (SAWIRRO)